शिक्षा:, माध्यमिक शिक्षा र स्कूलहरू
द्वितीय विश्वयुद्धले धेरै मानिसहरूको जीवनमा दावी गरेको छ। यस युद्धको क्रममा इतिहासमा यति धेरै भयानक थिएनन्। मानवता को यसको पुनरावृत्ति को रोकन को लागि यो सपना को भूलने को अधिकार छैन। हाम्रो राज्यले गम्भीर असर पारेको छ, प्रत्येक परिवारले यस भयानक अवधिमा कसैलाई हराएको छ। "युद्ध" मा निबंधले विद्यार्थी वा विद्यालयका विद्यार्थीहरूलाई यो घटनाबारे सोच्न मदत गर्न सक्दछ, सम्भवतः ती भयानक घटनाहरूको प्रत्यक्ष साक्षीहरूसँग कुराकानी गर्न र सही निष्कर्ष निकाल्दछ।
साहित्यमा महान देशी युद्धको विषय
यो आपदा बीसौं शताब्दीका कार्यहरूको मुख्य विषय थियो। यस घटनाको लागि धेरै कारणहरू छन्। यसमा ती डरलाग्दो कुरा हो जसले मानिसलाई सहन थाल्दछ, अपरिवर्तनीय हानिलाई घमण्ड गर्दछ, चरम परिस्थितिहरूमा मानव कार्यहरूको प्रतिबिंबित गर्दछ। विषयवस्तु "युद्ध" विषयमा गुणस्तरको स्रोतमा आधारित हुनुपर्छ। के एक साहित्यिक काम यस्तो स्रोत मान्न सकिन्छ? निस्सन्देह, हाँ। तथापि, कला कला कार्यहरूमा भरोसा गर्न आवश्यक छैन, काम वृत्तचित्र र ऐतिहासिक स्रोतहरू थपिन्छन् भने काम थप रोचक र बहुमुखी हुनेछ।
कामको शैक्षिक महत्व
"युद्ध" मा एक निबंधले विद्यार्थी वा एक विद्यार्थीलाई यो अवधि अध्ययन गर्न बढी समय खर्च गर्न अनुमति दिन्छ। यो महत्त्वपूर्ण छ कि निबन्ध लेखन व्यक्ति व्यक्ति बुझ्न सक्छ कि फीचर न केवल सामने लाइन मा, तर पछि पनि पछि प्रतिबद्ध थियो। सम्पूर्ण मानिसहरूले यस युद्धमा जीवित रहने एक विशाल चित्र बनाए। विजयको लागि सबै आवश्यकसँग सैनिकहरू प्रदान गर्न मानिसहरूले आफ्नो क्षमताको सीमामा काम गरे।
"युद्ध" मा लेखले अर्को पक्षमा भएका मानिसहरूप्रति घृणित हुदैन। यसले हाम्रो जनताको वीर देवता देखाउनुपर्दछ। फिलहाल, सामग्री घोषणा गर्ने सार्वजनिक पहुँच उनीहरूलाई अध्ययन गरे, तपाईं धेरै रोचक तथ्यहरू पत्ता लगाउन सक्नुहुन्छ।
विषयवस्तु "द ग्रेट युद्ध" को संरचनामा संरचना हुनु पर्छ, उदाहरणका लागि:
एक सैनिकको विशेषता (परिवारबाट कोहीको उदाहरण);
पीछे मा भारी काम दिन;
आपत्तिहरू युद्धद्वारा ल्याए;
यो एक काम मा एक विषय को सबै पहलुहरु लाई हल गर्न को लागी जरूरी छैन, यो एक मा ध्यान केंद्रित गर्न को लागि बेहतर छ, तर काम गहरा, रोचक बनाउन को लागि।
तपाईंले लेख्न बस्नु अघि, सोच्नु भएको आधारभूत विचार तपाईं आफ्नो संरचनासँग व्यक्त गर्न चाहानुहुन्छ, यो पाठकलाई के भन्नुपर्दछ। र यो लाइनमा छडी।
एउटा निबन्धको उदाहरण
प्रश्न उठ्छ कि यस्तो निबन्ध प्रासंगिक छ कि? महान् देशभरी युद्धको विषय कहिल्यै महत्त्वपूर्ण हुँदैन। आखिर, इतिहास चक्रवात हो, घटनाहरु दोहोर्याइएको छ, र यदि तपाई आफैलाई यी दुःखलाग्दो क्षणहरू बिर्सनुको लागि अनुमति दिनुहुन्छ भने त्यसोभएको यो संभावना धेरै उच्च छ।
प्रत्येक परिवारको आफ्नै नायकहरू छन्, धेरैले युद्धबाट फर्काएका छैनन्, तर तिनीहरूका सम्झना जीवित छन्। हामी सम्झन्छौं कि हरेक व्यक्तिको योगदान पनि एक सानो कुराले अर्को मिनेटको लागि सफलता ल्यायो।
हामी नबिर्सने कि शोषण मात्र अगाडि लाइनमा थिए। पछिल्ला दिनमा दैनिक मेहनतको कामले लडाइँ भन्दा कम छ। त्यस समयमा, किशोरीहरु र महिलाहरु लाई अगाडिको लागि सबै केहि आवश्यक बनाउन मिसिनहरु सम्म पुग्नुपर्छ।
विजय हाम्रो देशमा ठूलो मूल्यमा दिइएको थियो। यसको लागि धन्यवाद, हामी सबै यहाँ जीवनको आनन्द उठाउन सक्छौं। युद्ध हराएको भए के हुनेछ भनेर सोच्न डरलाग्दो छ।
हाम्रा ठूला ठूला पिताहरूको शोषणको बारेमा बिर्सनुहोस्, हामीसँग कुनै अधिकार छैन, किनकि कथा फरक थियो भने, शायद हामीमध्ये कुनै पनि यहाँ बस्न हुनेछ। हामी सबैलाई के हुनेछ भनेर हामी राम्रा राम्ररी जान्दछौं। हामी आफैले आफ्ना ठूला ठूला पिताहरूको शोषणलाई बिर्सने अनुमति दिँदैनौं, हामी प्रमाणित गर्नेछौं कि तिनीहरूको बलिदान बेकार थियो, कि तिनीहरू बिर्सने छैनन्।
शब्दको कलाको रूपमा कथा
संसारमा सबैभन्दा प्रसिद्ध ज्वालामुखी। Vesuvius ज्वालामुखी को भौगोलिक समन्वय
"मातृभूमि" मा रचना - एक देशी कथा कसरी लेख्न?
वाक्यांश को अर्थ "जस्तै पानी मा एक मछली", प्रयोग को उदाहरण
को क्षति के हो? पहिचान र लिन कसरी
उच्च एडी मा जूता छनौट
हुड लक - प्रकार र कार्यक्षमता
मंदी - अर्थव्यवस्था मा एक downturn
मोजाम्बिक च्यानल - संसारको सबैभन्दा लामो
मासु पाइ "ओपेरा कार्टून अक्षर।" लागि नुस्खा
अलेक्जेन्डर Kalyagin: जीवनी, Filmography, व्यक्तिगत जीवन
युद्ध बारे छोराछोरीलाई कसरी बताउन? महान देशभक्तिपूर्ण युद्ध को बच्चाहरु
VAZ 21099: समीक्षा, राय, इच्छा
जो राम्रो छ - को छत फर्श वा laminate? को floorboard र laminate को छत कस्तो भिन्नता छ?
सुपर ग्लू - विभिन्न सतहहरु एउटा समाधान भन्दा? व्यावहारिक सिफारिसहरू र समीक्षा